Portal:Juqraafi/Maqaal xul ah - Wikipedia
Portal:Juqraafi/Maqaal xul ah
Portal:Juqraafi/Maqaal xul ah/1
Afrika waa qaarada labaad ee ugu weyn qaaradaha aduunka kadib qaarada Aasiya dhanka baaxada iyo dhanka dadkaba. Baaxada Afrika waxay la'egtahay c. 30,244,050 km² (11,677,240 mi²) tiradaas waxaa ku jira dhamaan jasiiradaha lagu xisaabo Afrika. Afrika baaxadeeda waxay dabooshaa 20.3% baaxada dhulka oo dhan. Sida lagu xusay tirokoob caalami ah oo la sameeyay sanadkii 2013ka waxaa ku nool qaarada Afrika dad tiradooda ay dhantahay 1.1 bilyan taasi oo ah tiro u dhiganta todobo qeyboodoo qayb dadka dunida ku noolo maanta. Qaarada Afrika waxaa ku hareersan biyo; Bada Mediterraniyanka waxay ka xigta waqooyi, sidoo kale Gacanka Suweys iyo Bada Cas waxay ka xigaan waqooyibari, Badweynta Hindiya ayaa kaga taala koonfurbari, iyo Badweynta Atlantika oo ka xigta galbeed. Intaas waxaa dheer, wadanka jasiirada Madagaskar iyo jasiirado kale ayaa soo hoosgala qaarada. Sida rasmiga ah waxaa qaarada Afrika degan 54 wadan oo la aqoonsan yahay, sagaal deegaan iyo labo wadan oo wali la aqoonsan.
Juquraafi ahaan, wadanka Aljeeriya ayaa ugu wayn dhulka iyo baaxada, halka Nayjeeriya ugu dad badan tahay; waxaana guud ahaan caalamka la isku raacay in badhtamaha iyo Bariga Afrika yihiin meesha aadamuhu ka soo beermeen markii ugu horeeysay. Waxaa deegaanadan laga helay lafo aad u da' weyn oo muujinaya horaantii dadka. Tusaale ahaan, wadanka Itoobiya waxaa laga helay lafaha ugu da'da weyn inta la ogyahay midaasi oo jirta 200,000 kun sano.
Portal:Juqraafi/Maqaal xul ah/2
Silsilada Buuraha Oogo sidoo kale loo yaqaano Buuroleyda Galgodon, waa deegaan buuroley ah oo dhaca Waqooyiga Soomaaliya. Silsilada buurahan waxay dhex maraan gobolada Sanaag iyo Togdheer; kuwaasi oo meesha ugu dheer gaadhayso ilaa 2,450 mitir (8,038 ft). Intaas waxaa dheer, guud ahaan juquraafiga deegaanka silsiladani dhexqaado waa mid qalalan oo u dhow lamadegaan la mood. Silsilada buuraha Oogo waa kuwo dhaca deegaan joogiisu sareeyo kaasi oo ku kooban waqooyiga wadanka Soomaaliya. Deegaankani wuxuu leeyahay cimilada deegaanada jooga sare leh ee Aasiya oo kale. Waxaa deegaankan aad ugu qaab dhow yahay Lamadegaan la mood.
Portal:Juqraafi/Maqaal xul ah/3
Bahda Midaysay Qoraxdu waa qoraxda, 8da meere, dayaxyo badan oo ku wareega meereyaasha, dhowr duniyar iyo tiro badan oo dhagaxaan, baraf iyo hawoooyin ah; kuwaas oo dhammaantood ku wareega qoraxda oo badhtanka ku taala. Bahda Qoraxdu Midaysay waxay ka tirsan tahay nidaamka Galaagsiyada ee loo yaqaan The Milky Way. Waxaana la sheegaa in meerayaasha, dayaxyada, dunidayar iyo dhammaan walxaha ku jira bahdan ay sameeysmeen wakhti hada laga joogo 4.5 bilyan oo sano ka hor. Inta ugu badan cufka iyo mugu waxaa laga dhex helaa qoraxda oo ugu wayn dhammaantood, iyo meeraha Cirjeex oo ugu wayn meerayaasha sideeda ah. Afarta meere ee u dhow qoraxda - Waxaraxir, Dusaa, Dhulka iyo Farraare - kuwaas oo loo yaqaano Meere Dhagaxley, waxay inta ugu badan ka samaysan yihiin bir. Dhinaca kale, afarta meere ee banaanka u baxsan ee loo yaqaano Neefaha Waawayn - Cirjeex, Raage, Uraano iyo Docay - kuwaas oo aad uga jidh iyo xajmi wayn meerayaasha dhagaxleyda ah, waxay ka samaysan yihiin neefo. Labada meere ee ugu xajmiga wayn bahda midaysay qoraxdu, Cirjeex iyo Raage, waxay ka kooban jihiin curiyeha haydarojiin iyo hiliyaam, labada ku sii xiga ee Uraano iyo Docay waxay ka samaysan yihiin sheeyo dhalaali kara oo inta ugu badan ah baraf. Si kastaba ha ahaatee, bahda qoraxdu midaysay waxay leedahay deegaano ay ka buuxaan walxo yaryar. Tusaale ahaan, suunka asteroidska ee u dhaxaysa Farraare iyo Cirjeex, si la mid ah meerayaasha dhagaxleyda ah, waxaa ka dhex buuxa sheeyo yaryar oo ka samaysan bir iyo dhagaxaan. Meereha Docay xadka ka dambeeya oo loo yaqaano Suunka Kuiber (Kuiper Belt) waxaa laga helaa duniyo yaryar oo la qaab ah Docay. Meeshan waxaa ku jira in ka badan toban kun (10,000) oo sheey kuwaas oo hadii ay aad u waynaan lahaayeen aygu isku wareegi lahaa. Dunida yaryar ee ka dambeeysa Docay ee ku dhex jira suunka kubier waxaa ka mid ah asteroidka Ceres, Bluto iyo Eris. Lix ka mid ah meereyaasha, iyo ugu yaraan 3 ka mid ah dunidayar, iyo sheeyo yaryar oo kale waxaa ku wareega walxyo ka yar ayaga kuwaas oo loo yaqaano Dayaxa meere. Meeraha Cirjeex ayaa ugu dayax badan, ayadoo leh tiro dhan 67 dayax.
Portal:Juqraafi/Maqaal xul ah/4
Portal:Juqraafi/Maqaal xul ah/5
Roob waa dhibco biyo dareere ah oo ka yimaada daruuraha cirka taasi oo ku soo da'da oogada sare ee dhulka. Roobku wuxuu ka mid yahay marxaladaha "wareega biyaha" waana nidaamka dhulku ku helo biyo saafi ah. Roobku wuxuu sameeysmaa markaa biyaha fadhiya (sida harooyinka, balayada, webiyada iyo badaha) ay ku uumi-baxaan cirka, halkaas ooy ku qaboobaan ka dibna cufisjiidadka dartii ku soo dhaca dhulka ayagoo ah dhibco biyo hoore ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Juqraafi/Maqaal_xul_ah&oldid=171047"
Last edited on 15 Sebteembar 2017, at 09:16
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Sebteembar 2017, marka ee eheed 09:16.